Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Ibom Air yaseNigeria ithenga iijethi ze-Airbus A220 ezintsha ezilishumi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Ibom Air yaseNigeria ithenga iijethi ze-Airbus A220 ezintsha ezilishumi.
INigeria, enabemi abaninzi e-Afrika kunye ne-GDP inkulu, ibonelela ngokukhula okubonakalayo kokuhamba kwasekhaya kunye nommandla.
I-Ibom Air ngoku ibhabha i-Uyo, Abuja, Calabar, Enugu, Lagos, nasePort Harcourt isebenzisa ii-A220 ezimbini.
Ukuthengwa kwee-A220 ezintsha kuya kwenza ukuba inkampani yeenqwelo moya iqhubele phambili kwindlela yayo yokukhula, ibonelela ngeendlela ezintsha ezinqumla kungekuphela nje eNigeria, kodwa eziya kummandla osentshona Afrika kunye naseAfrika ngokubanzi.
I-Airbus A220 kuphela kwenjongo yenqwelo-moya eyakhelwe imarike yezihlalo ze-100-150.
Urhulumente welizwe lase-Akwa Ibom unenqwelomoya eNigeria, Umoya we-Ibom utyikitye iodolo eqinileyo yee-A10 ezilishumi (220) eDubai Airshow. Utyikityo lwenziwe nguMfon Udom, iGosa eliLawulayo eliyiNtloko le-Ibom Air, kunye noChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kunye neNtloko yeSebe. Airbus International phambi kweRhuluneli yelizwe lase-Akwa Ibom, uMnu Udom Gabriel Emmanuel.
INigeria, enabemi abaninzi e-Afrika kunye ne-GDP inkulu, ibonelela ngokukhula okubonakalayo kokuhamba kwasekhaya kunye nommandla. I-A220 ke ngoko yolona khetho lufanelekileyo kuluhlu olupheleleyo lweenkonzo ukusuka kumacandelo amafutshane kakhulu ukuya kwiindlela zomoya zangaphakathi kwelizwekazi.
“Kundivuyisa kakhulu ukuba lapha ukwazisa iodolo ye-Ibom Air ye-10 Airbus A220s”, utshilo uMfon Udom, iCEO yakwa Umoya we-Ibom. “Njengombutho, thina kwa-Ibom Air sonwabile kukukhula okuthe kratya esikuzuzileyo kwisithuba nje esingaphaya kweminyaka emibini enesiqingatha ukusukela oko sathi saqalisa ukusebenza, ukukhula okuqhutywa kukwamkelwa okukhulu kwemveliso yethu kunye nophawu luluntu olubhabhayo lwaseNigeria. . Ukongezwa kwe-A220 kwiinqwelo zethu kuya kuxhasa isicwangciso sethu sokukhula kunye nokunyusa ukusebenza ngokufanelekileyo. Iya kunika abakhweli bethu indawo eyongezelelekileyo kunye namava aphuculweyo ekhabhinethi, njengokongeza ixabiso lokusikhetha. ”
“I-A220 iya kusivumela ukuba sonyuse inani labakhweli bonyaka kwisikhululo seenqwelomoya i-Akwa Ibom, e-Uyo, ngaloo ndlela sizise abatyeleli abaninzi abaqalayo kunye nabahambi beshishini kulo mmandla. Ezi nzame zibonisa ukuzibophelela kwethu ekuxhaseni urhwebo lwasekhaya kunye nokwenza igalelo elihle ekukhuleni kwezentlalo noqoqosho kwilizwe lase-Akwa Ibom naseNigeria. yatsho iRhuluneli yelizwe lase-Akwa Ibom, uMnu. Udom Emmanuel.
Umoya we-Ibom ngoku isebenza ii-A220 ezimbini. Inqwelo moya ibhabha isiya eUyo, Abuja, Calabar, Enugu, Lagos, nasePort Harcourt. Ukuthengwa kwee-A220 ezintsha kuya kwenza ukuba inkampani yeenqwelo moya iqhubele phambili kwindlela yayo yokukhula, ibonelela ngeendlela ezintsha ezinqumla kungekuphela nje eNigeria, kodwa eziya kummandla osentshona Afrika kunye naseAfrika ngokubanzi.
“Siyavuya ukongeza i-Ibom Air njengomthengi omtsha we-Airbus. I-A220 ifaneleke ngokufanelekileyo kwiimfuno ze-Aviation yaseNigeria, ibonelela ngokuguquguquka kokusebenza ukukhulisa ishishini ngokusabela kwimfuno yokwanda kweenkonzo zabakhweli. Ngolu tyalo-mali, i-Ibom Air igxininisa umnqweno wayo wommandla kunye nexesha elifanelekileyo, uqhagamshelwano lwamazwe ngamazwe kunye nokusebenza kakuhle. ", utshilo uChristian Scherer, Airbus IGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kunye neNtloko yeZizwe ngezizwe.
I-A220 kuphela kwenjongo yenqwelo-moya eyakhelwe imarike yezihlalo ze-100-150; inikezela ngokusebenza kakuhle kwepetroli kunye namava abanzi okuthuthuzela umzimba kwikhabhathi enendawo enye, enezihlalo ezibanzi ezongezelelekileyo, igumbi lomlenze ongaphezulu kunye noqhagamshelo kwibhodi yokuzonwabisa kunye nonxibelelwano.
Ekupheleni kuka-Okthobha ka-2021, i-A220 yayiqokelele ii-odolo eziqinileyo ezingama-643.